7 ဥရောပရှိအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပရှိအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ
အစိမ်းရောင်ပန်းခြံများ, တောင်တက်လမ်းကြောင်း တောင်ပေါ်မှာ, နှင့်အဆင်ပြေရာသီဥတုအိမ်ပြင်ပျော်စရာရှိခြင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်. ဥရောပရဲ့နာမည်ကြီးမြို့ကြီးတွေမှာအရာအားလုံးရှိတယ်၊ ဒါကြောင့်ဥရောပကကမ်းလှမ်းထားတဲ့အပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုသင်ကြိုးစားနိုင်မှာဖြစ်တယ်. အမ်စတာဒမ်ရှိစက်ဘီးစီးခြင်းမှသည်မြူးနစ်တွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းအထိ, ဤ7ဥရောပမှာပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများဖြစ်ကြသည် စံပြအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်.
1. ဥရောပရှိအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: အမ်စတာဒမ်, နယ်သာလန်
မြို့ကိုမြစ်တူးမြောင်းပတ်ပတ်လည်တည်ဆောက်သောအခါ, သင်အားလပ်ရက်ကိုအိမ်ပြင်မှာသုံးဖို့. အမ်စတာဒမ်ကိုဥရောပမှာစက်ဘီးစီးနိုင်ဆုံးမြို့အဖြစ်လူသိများတယ်. စက်ဘီးစီးခြင်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သာမကဒေသခံများအတွက်လည်းဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
စက်ဘီးစီးခြင်းသည်ဥရောပ၌ကြီးစွာသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်, ခရီးသွားနှင့် sightseeing ဘို့. နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကမြို့ကိုစူးစမ်းခြင်းဖြစ်သည် လှေပေါ်မှာ, ချစ်စရာကောင်းတဲ့တံတားများနှင့်ဒတ်ခ်ျဗိသုကာလက်အောက်တွင်. လမ်းခုလတ်မှာ, အခြား Boa ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ် Amstel မြစ်နားရှိချစ်ဖွယ်ကောင်းသည့်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်သင်သောက်ရန်ခုန်နိုင်သည်.
လေကောင်းလေသန့်, ကောင်းကင်ပြာပြာ, နှင့်ရှုခင်းပြောင်းလဲခြင်းတက်ကြွခြင်းနှင့်ပုံသဏ္inာန်၌တည်သောများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော setting ကိုများအတွက်ပါစေ အားလပ်ရက်ခရီးစဉ်မှာ.
2. ဂျီနီဗာ, ဆွစ်ဇာလန်
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရှိပါတယ် အများဆုံးသာယာလှပအမြင်များ ဥရောပမှာ, နှင့်ဂျီနီဗာကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သဘာဝဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်. ထို့ကြောင့်, ဒေသခံများအနေဖြင့်၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်၏အမြင်များနှင့်မြေများကိုအများဆုံးရရှိသည်, ပြင်ပနှင့်တက်ကြွစွာတည်းခို. ဥပမာ, ရေကန်ဂျီနီဗာ, ရေကန်အား Leman ဟုလည်းခေါ်ကြပြီးရေအားကစားအတွက်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်.
လှေစီး, ငါးဖမ်း, kayaking, ရေကူးသို့မဟုတ်ဖောင်, ဂျနီဗာရေကန်တွင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်. သင်တစ် ဦး လှေငှားရမ်းသို့မဟုတ်တတ်နိုင်ယူနိုင်ပါတယ် ရွက်လွှင့်သင်တန်း.
သင်ကတောင်ကြီးသူတစ်ယောက်ဆိုရင်, ထို့နောက်ဆွစ်အဲလ်ပ်တောင်တန်း '' လမ်းကြောင်းဝေးမြို့ကနေတိုတောင်းတဲ့စီးနင်းဖြစ်ကြသည်. တောင်တန်း စက်ဘီး, တောင်တက်, စခန်းချ, နှင့်ဆောင်းရာသီအတွက်နှင်းလျှောစီးဂျီနီဗာ၌ပျော်မွေ့ရန်အလွန်ကြီးစွာသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ကြသည်.
3. ဥရောပရှိအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: မြူးနစ်, ဂျာမနီ
မြူးနစ်သည်အကြီးမားဆုံးသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည် မြို့ပြပန်းခြံများ ကမ္ဘာပေါ်မှာ, အင်္ဂလိပ်ဥယျာဉ်. ကျယ်ပြန့်သောအစိမ်းရောင်မြေများသည်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, အရှင်၏ထိပ်မှာမြူးနစ်အားမရ7ဥရောပ၌ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ.
အင်္ဂလိပ်ဥယျာဉ်၌တည်၏, သငျသညျတက်ကြွနေနိုင်ပါတယ်, အပြေးသို့မဟုတ်အအေးခန်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ, အပေါ် ရေအားဖြင့်ပျော်ပွဲစား, နေရောင်ခြည်, နှင့်ရေကူး. မြူးနစ်တွင်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်နောက်ထပ်ထူးခြားသည့်နေရာမှာလူလုပ် Eisbach မြစ်ဖြစ်သည်, အင်္ဂလိပ်ဥယျာဉ်၌တည်၏. လှိုင်းတံပိုးဖမ်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ရွေ့လျားလေ့ကျင့်ခြင်းအဘို့အ surfers များအတွက်အကြိုက်ဆုံးနေရာတစ်ခုပါပဲ.
မြို့တော်၌နေခြင်းသို့မဟုတ်ကျေးလက်သို့ထွက် ဦး တည်, ဗီယင်နာသည်ဥရောပ၌ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အလွန်ကောင်းသောမြို့ဖြစ်သည်. ဒူညုကျွန်းပေါ်တွင် Cruise, သို့မဟုတ်အလုပ်များသောစင်တာပြင်ပသို့ Lainzer Tiergarten သို့ ဦး တည်သည် သဘာဝအရံ, ဗီယင်နာ၌မည်သည့်ခရီးသွားအမျိုးအစားအတွက်မဆိုပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများစွာရှိသည်.
သင်ဗဟိုတွင်နေရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်, ရှုခင်းများကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ Segway ခရီးစဉ်သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းမြစ်အတွင်းခရီးထွက်ခြင်းဖြစ်သည်. ဒါပေမဲ့, ဒေသခံတစ် ဦး ကဲ့သို့ဗီယင်နာစူးစမ်းပိုနှစ်သက်ပါ, နှင့် ၎င်း၏ဝှက်ထားသောကျောက်မျက်ရှာဖွေတွေ့ရှိ, ထို့နောက်သဘာဝအရံပြီးပြည့်စုံသော.
25 စတုရန်းကီလိုမီတာရှိသောသစ်တောနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များသည်ဗီယင်နာရှိအကြီးဆုံးမြို့ဥယျာဉ်၌သင့်အားစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်. လမ်းလျှောက်ပါ, ပြေးလမ်း, သို့မဟုတ်ဤအစိမ်းရောင်အိုအေစစ်တွင်ပျော်ပွဲစားရှိသည်, မင်းလုပ်မယ် ဗီယင်နာ အားလပ်ရက်ပြည့်စုံ.
5. ဥရောပရှိအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: ဇူးရစ်, ဆွစ်ဇာလန်
အခါ Alpine တောင်ထိပ်နှင့်ရှုခင်းများပတ်ပတ်လည်အခါ, ရှေ့တွင်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ရေကန်တစ်ခုပါရှိသည်, သင်သည်ဥရောပရှိပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. ဇူးရစ်ဟာပျော်စရာကောင်းတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါ, သင်သွားနိုင်သည့်နေရာ SZU ရထားကိုလေ့လာရေးမျှော်စင်သို့ခေါ်သွားပါ. လေ့လာရေးတာဝါသည် Uetilberg တွင်တည်ရှိသည်, ပတ်ဝန်းကျင်အံ့သြဖွယ်အမြင်များနှင့်အတူမြို့ရဲ့လှပသောတောင်ကြီးတောင်ငယ်.
သငျသညျတောင်တက်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, ထို့နောက် Uetilberg မှတောင်တက်လမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ဗဟိုသို့တက်နိုင်သည်. ဇူးရစ်မြို့၏နောက်ထပ်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုသည်မြစ်၏ညာဘက်ခြမ်းတွင်ပျော်စရာဖြစ်သည်, ကမ်းခြေ volley ၏ဂိမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ပဲအပန်းဖြေ, အဆိုပါ Flussbad Oberer Letten မှာ, ဒေသခံတွေ '' Hangout အစက်အပြောက်.
Zurich ရှိခရီးသွား like ည့်သည်ကဲ့သို့သင်လုပ်လိုလျှင်, ထို့နောက်မြို့ရဲ့အောက်မှာသင်တို့ကိုယူပါလိမ့်မယ် Limmatschifffahrt န်းကျင်တစ် ဦး круизများအတွက်လှေပေါ်ခုန်7တံတားများ.
ရထားအားဖြင့် Zurich မှ Interlaken
ရထားအားဖြင့် Zurich မှ Lucerne
ရထားအားဖြင့် Zurich မှ Lugano
6. nice, ပြင်သစ်
နံနက်ခင်းတွင်ရေကူးခြင်းသို့မဟုတ်ပျော်မွေ့ခြင်း, အများဆုံးချောမောလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုဖြစ်သည်. သင်အားလပ်ရက်ခရီးရောက်နေရင်တောင်, တက်ကြွစွာနှင့်ပုံသဏ္bာန်ချိန်ခွင်၌တည်းခို ဒေသခံအစားအစာကိုမြည်းစမ်း နှင့်သင်ကိုယ်တိုင် pampering. ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၏ထိပ်တွင်, ပြင်သစ်ရီဗီယာသည်စွမ်းအားနှင့်ဗီတာမင်စီတို့နှင့်ပေါင်းစပ်သောအခါတက်ကြွသောစိတ်အခြေအနေသည်အံ့သြစရာကောင်းသည်.
Nice ဟာအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြို့ဖြစ်သည် ဥရောပ၌ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများသည်. ကမ်းခြေပေါ်မှာစီးနင်းမြင်းစီး, ရေကူး, seashells ကိုရှာဖွေနေသည်, နှင့်နေဝင်ချိန်မှာပျော်ပွဲစားရှိခြင်းအားလုံးပြင်သစ် Riviera ၏အကောင်းဆုံးခံစားရန်ကြီးစွာသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ကြသည်.
7. ဥရောပရှိအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ: Florence, အီတလီ
Florence သည်အီတလီရှိအလှဆုံးမြို့များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. သငျသညျတူသောမြို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် အားလုံးခရီးသွား။ ည့်, သို့မဟုတ်လုံးဝအထူးမေ့မရသောလမ်းဖြင့်ဖြစ်သည်. အထင်ကရနေရာများနှင့်ရှုထောင့်များမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးခြင်းသည်ဖလောရင့်စ်၌စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုဖြစ်သည်.
သို့သျောလညျး, သငျသညျနှစ်ခုထူးခြားသောပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများကြိုးစားရန်လိုလျှင်, နှင့်ဥရောပ၌အကောင်းဆုံးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအနည်းငယ်, ထို့နောက်ပူပြင်းသောလေပူလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့် skydiving ကြိုးစားပါ. Florence ၏ဗိသုကာနှင့်ပန်းခြံများသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းပြီးအထက်မှမြင်ကွင်းသည်စာသားကိုသင်၏သက်တမ်းကိုပျောက်စေလိမ့်မည်.
သငျသညျခရီးသွား of ည့်လူအစုအဝေးကိုရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအသစ်ကြိုးစားနေလိုလျှင်, ထို့နောက် Florence သည်ဥရောပရှိပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြို့ဖြစ်သည်.
မီးရထားအားဖြင့် Florence သို့ဂျီနိုအာ
ရထားအားဖြင့် Florence မှ Parma
ရထားဖြင့် Florence သို့ဗင်းနစ်
ဥရောပဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပြည့်နေတယ်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ သင်သည်ဥရောပသို့အကြိမ်မည်မျှခရီးသွားခဲ့သနည်း, အသစ်တစ်ခုကိုစွန့်စားမှုအမြဲရှိပါတယ်. ငါတို့7ဥရောပရှိပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့များသည်စွန့်စားသူများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာရှာကြံသောခရီးသွားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, ရိုးရှင်းစွာလှပသောအပြင်ပန်းနှင့်ရှုခင်းများကိုစူးစမ်းလိုသောသူများအတွက်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဤပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများမှရရှိနိုင်သည့်စျေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေပေးရာ၌ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းသာပါလိမ့်မည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပရှိအပြင်ဘက်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အကောင်းဆုံးမြို့ကြီး ၇ ခု” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/cities-outdoor-activities-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
လှုပ်ရှားမှုများ frenchriviera outdoor OutdoorActivities Tranride ရထားခရီးသွား ချစ်သူ travelitaly travelswitzerland TravelVienna